Gịnị bụ Social Media Monitoring? Ihe niile I Kwesịrị Knowmara! | Martech Zone
Gịnị bụ Social Media Monitoring? Ihe niile I Kwesịrị Knowmara!
Wednesday, November 16, 2016 Douglas Karr
Ikekwe anyị kwesịrị ịmalite ya mere. Mgbe ụfọdụ anyị na ndị ahịa na-ekwurịta mmekọrịta ndị na-elekọta mmadụ, ha na-asị na ha anọghị na mgbasa ozi mmekọrịta ka ha ghara ichegbu onwe ha banyere ya. Ọfọn… nke ahụ bụ nwute n'ihi na agbanyeghị na akara gị anaghị esonye na mkparịta ụka mmekọrịta, ọ pụtaghị na ndị ahịa gị na ndị ahịa ị chọrọ esonyeghị.
Ihe Mere I Kwesịrị Inyocha Social Media
An iwe ndị ahịa na-ekwurịta banyere iwe ha na ntanetị. Agencylọ ọrụ anyị nwere ọrụ siri ike ọnwa ole na ole gara aga ma anyị were ego ọzọ iji dozie ọnọdụ ahụ na ego anyị. Ọbụna anyị gosipụtara na ndị ahịa na ha nwere afọ ojuju na nsonaazụ… mana mgbe ahụ anyị hụrụ ka ha na-atụle anyị n'ịntanetị. Anyị kpọrọ ozugbo, dozie ọnọdụ ahụ, ha wepụrụ mkparịta ụka ahụ. Ọ bụrụ na anyị anaghị ege ntị, anyị agaraghị enwe ike ijide n'aka na ha nwere afọ ojuju na aha anyị ka ejiri akọ.
A gaje ịbụ onye ahịa nke ahụ zuru oke maka ngwaahịa na ọrụ ụlọ ọrụ gị dị na nzukọ mmekọrịta ọha na eze na-arịọ maka enyemaka na nkwenye maka onye na-ere ahịa. Ebe ọ bụ na ịnọghị na mkparịta ụka ahụ, onye asọmpi ọzọ na-abanye, na-enyere ha aka, na ikuku na-enweta nkwekọrịta ahụ.
A onye na-enwe obi ụtọ kwuru banyere gị n'ịntanetị. Nyocha na nleba anya na-esiri ike ịnweta, yabụ mgbe mmadụ na-ekwu okwu ọma banyere gị - ọ bụghị naanị na ịchọrọ ịnụ ya, ị ga-ekwupụtakwa ya. Akaebe nke ndị ọzọ bụ ụzọ dị irè iji mee ka ntụkwasị obi onye ahịa nwee ntụkwasị obi.
a ozi sitere na Salesforce na Unbounce na-ejegharị site n'okwu okwu na isi nke nlekota oru mgbasa ozi. Site na okwu - dị ka ọdịiche dị n’etiti ịge ntị, nlekota, njikwa, nchịkọta, na ọgụgụ isi - na usoro ndị dị adị maka ika gị iji tinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta nke ọma.
Gịnị bụ nlekota oru Social Media
Tags: ndị ahịanchịkọta mmadụ mgbasa oziọgụgụ isi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozinjikwa elekọta mmadụnlekota oru mgbasa oziadịghị amaihekedu ihe mgbasa ozi mgbasa ozi
33Arossross: Nyocha Ego Na-ege Ntị na Mgbapụta Ebube Ebube Buru
Ntuziaka 20 iji chụgharịa E-Commerce na-agbanwe oge ezumike a